Hamma dhiibba dhiigaa kaamera bilbila sochootun safaruuf hojjetama jira – Fana Broadcasting Corporate
Hamma dhiibba dhiigaa kaamera bilbila sochootun safaruuf hojjetama jira
Finfinnee, Hagayya 8,2011 (FBC) – dhiibbaa dhiiga guddaan dhukkuba Onnee fi dhiigni mataa keessatti dhangala’uu (Istook) dabalatee dhiibee cimaaf nama saaxilu danda’a.
Rakkina dhufu dursanii hubachuun yeroo yeroon hamma dhiibba dhiigaa keenya ilaalachisuun dirqama.
Furmaata kanaaf ammo yeroo hunda gara buufata fayyaa deemuun otuu hin taane mana keenya teenye hordoofuu akka dandeenyuuf teeknoolojiiwwaan yeroodha gara yeroo yaalamaa fi hojjetamaa jiru.
Akka qorattoonni teeknoolojii ‘’traansidarmaal’’ jedhamu beeksisaniitti, teeknoolojiichi bilbila sochootu smaart fayyadamuun maarsaa dhiiga fuula keenya keessa jiru ilaaluun hamma dhiibba dhiiga keenya odeeffannoo kan kennudha jedhaniiru.
Hogganaan garee qorannoo Yuunvaarsiitii Kanaadaa Toroontuu Kaang Lii tumsa teeknoolojiin bilbiloota sochootu smaart fayyadamuun hamma dhiiba dhiigaa nama tokkoo sakaandii 30 keessaatti beekuun akka danda’amu beeksiseera.
Teeknoolojiin kun bal’inaan hojiirra oole namoonni salphaatti hamma dhiibba dhiigaa isaani akka safaraman ni barbaanna kan jedhan Liin; kana gochuuf ammoo hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.
Teeknoolojichi ifa kan fayyadamu yoo ta’u, ifichi gogaa keenya keessa darbuuf yeroo seenu kaameraan bilbila sochootu (mobaayila) keenya marsaa dhiiga fuula keenyarra jiru ilaaluun hamma dhiiba dhiigaa keenya madaaluun ni danda’ama jedheera.
Yeroo ammaa kana teeknoloojicha gara hojiitti galchuuf hojjetama kan jiru yoo ta’u, hanga ammaatti dargaggoota Chaayinaa fi Kanaadaa kuma1 fi 300 irratti yaalamuu bekkameera.
Teeknoolojichiis %96 akka itti milkoomaan himaniiru.
Maddi: – UPI
Godina Jimmaatti namoonni kumni 30 ta’an balaa qaroo ijaaf saaxilaman
Abbootii qabeenyaa biyya Hinditti tajaajila fayyaa olaanaa laatan waliin mari’atame
Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addunya yaa’ii idila addunyaa waggaa…
Qulqullina Ilkaanii eeguun fayyaa onnee ni eega – qorannoo